१४६०.७३ विन्दुमा नेप्से | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर १४६०.७३ विन्दुमा नेप्से
on: November 09, 2017 मुख्य खबर, लगानी
१४६०.७३ विन्दुमा नेप्से
साताको अन्तिम दिन बढ्न लागेको बजार अन्त्यसम्म टिक्न सकेन
कात्तिक २३, काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन बिहीवार कारोबार भएदेखि घटेको बजार ३ घण्टाको अवधीमा बढेर १ हजार ४ सय ७५ दशमलव ५८ विन्दुमा पुगेको थियो । तर, सो विन्दुमा धेरै समय टिक्न नसकि अन्त्यमा घटेर १ हजार ४ सय ६० दशमलव ७३ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । बिहीवार नेप्से ५ दशमलव ८९ अङ्कले घटेको हो । नेप्से परिसूचक १३ दिनसम्ममा १ सय ११ दशमलव १९ अङ्कले घटेको छ ।
कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत घटेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण शून्य दशमलव ४० प्रतिशत घटेर रू. १६ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव १९ प्रतिशत घटेर ३ सय ६ दशमलव ७९ अङ्क पुगेको छ । कारोबार भएका १ सय ५४ कम्पनीमध्ये ५७ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ७७ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २० कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा करीब १० प्रतिशत बढेको छ । साथै, रिलायबल माइक्रोफाइनान्सको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ७ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ५४ कम्पनीको ५ हजार ५ सय ३३ पटकको व्यापारमा १० लाख ४६ हजार ७ सय २३ कित्ता शेयरको रू.४६ करोड ८२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेप्सेमा सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार भएका १० कम्पनीमा एभरेष्ट बैङ्क लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. १ हजार १ सय ५ मा रू.३ करोड २० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । साथै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क, नागवेली लघुवित्त वित्तीय संस्था, नविल बैङ्क, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, बैङ्क अफ काठमाण्डु लिमिटेड, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क, प्राइम कमर्शियल बैङ्क, एनआइसि एशिया बैङ्क र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर रू. ९२ लाखदेखि २ करोडसम्मको कारोबार भएको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा जलविद्युत र माइक्रोफाइनान्सको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्युट्रल जोन अथवा २५ दशमलव शून्य ८ स्केलमा रहेको छ । यसले बजार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव ७४ रहेको छ । यसले बजार वियरिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।